SALAFAINA MAHAMBO : Mihorohoro ny mponina, nahazo LP i Célin sy ny namany
Raharaha anisany nahoraka an-gazety tamin’ny volana febroary 2018 ny raharaha Célin. 20 août 2019
Ity farany izay tovolahy 36 taona kalaza amin’ny famonoana olona tao amin’ny faritra Mahambo. Vao 16 taona, dia efa namono olona. Nidoboka am-ponja saingy tsy naharitra ela dia efa votsotra. Nahavita nivarotra ny fananany ho sandan’ny fanaovana kolikoly teny amin’ny fitsarana ho sandan’ny famotsorana. Ny fijoroana vavolombelona nataon’ny mponina ao Salafaina no nahalalana fa hatramin’ny taona 2017 dia efa olona efatra no novonoin’i Celin.
Ity farany izay mpimasy lian-dra monina ao Salafaina zana-tanàna ao anatin’ny fokontany Ambodibonara Kaominina Mahambo distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana. Tanàna 10km avy ao Namahoaka, lalan-tany saingy tongan’ny fiara. Famonoana olona izay sokajin’ny mponina ao an-toerana ho efa karazana fahafinaretana ho an’ity mpimasy ity. Ny harivan’ny 24 janoary 2018 tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany hariva, dia efa nahavita namono olona tamin’ny fomba feno habibiana indray i Célin. Ny rahalahiny indray no naniraka azy hanao ilay habibiana.
Ilay rahalahiny izay miady tany tamina lehilahy antsoina hoe Christin Eva 54 taona fantatry ny mponina eny an-toerana amin’ny anarana hoe Risy. Ity farany izay sady novonoina no sady nodorana ny tranony ary mbola notifirina tamin’ny basim-borona ny vadiny saingy tsy maty, ka afaka nitantara tsara ary nanondro mazava fa anisany tao ataon’ireo olona nanao habibiana i Célin.
Norasaraina ny vatan’i Risy. Hita tao anaty rano tao amin’ny tanànan’i Salafaina ny vatabe. Ny marainan’ny alakamisy 25 janoary, voasambotra i Célin. Nitarika tamin’ny fahatrarana ny namany antsoina hoe Wa izany. I Wa indray avy eo no nanondro ireo namany. Mbola izy ihany koa no nanondro ny toerana nametrahana ny lohan’i Risy sy ny rantsam-batany. Olona fito nandray anjara mivantana na an-kolaka no voasambotra. Vola 300 000 Ar no voalaza fa karama azon’izy ireo tamin’ilay vono feno habibiana. Ny zandary tao Fenoarivo-Atsinanana no nisahana ny fanadihadiana. Tsy mbola nisy fitsarana ny tao Fenoarivo-Atsinanana ny taona 2018 ka ny fitsarana tao Toamasina no nandefasana ny raharaha.
Ankina ny mponina ao Salafaina amin’izao fotoana izao fa efa miriaria sahady i Célin sy ny namany enina. Nomen’ny fitsarana fahafahana vonjimaika izy ireo. Niverina monina ao Salafaina indray ary mandrahona ny hanao valifaty ho an’ireo nitory azy ka nahatonga azy nidoboka tao Ambalatavoahagny. Mihorohoro noho izany ny mponina. Anisany mahazo fandrahonana mafy ny fianakavian’i Risy. Manoloana izany indrindra, dia manao antso avo amin’ny fanjakana foibe ireo mponina ao Salafaina mba hijery akaiky izao zava-misy izao. Na dia teo aza mantsy ilay taratasy fangatahana fanaovana sesitany an’i Célin dia tsy nisy tohiny teo anivonny fitsarana Toamasina akory. Mahatsiaro ho tsy misy mpiahy ireo mponina ao an-toerana ka antso vonjy fara-hevitra.